लगातार ज्वरो र खोकी देखिएपछि ठोरीका एक व्यक्तिसहित परिवारलाई बीरगन्ज ल्याइदैं - Birgunj Sanjalलगातार ज्वरो र खोकी देखिएपछि ठोरीका एक व्यक्तिसहित परिवारलाई बीरगन्ज ल्याइदैं - Birgunj Sanjalलगातार ज्वरो र खोकी देखिएपछि ठोरीका एक व्यक्तिसहित परिवारलाई बीरगन्ज ल्याइदैं - Birgunj Sanjal
लगातार ज्वरो र खोकी देखिएपछि ठोरीका एक व्यक्तिसहित परिवारलाई बीरगन्ज ल्याइदैं
१८ चैत्र २०७६, मंगलवार १७:३९
ठोरी | ठोरी गाउँपालिका वडा नं. २ को बाडा गाउँका एक जना व्यक्तिलाई लगातार ज्वरो र खोकी देखिएपछि बीरगन्ज थप उपचारका लागि बीरगन्ज ल्याईदैछ । दिल्लीबाट ती व्यात्तिलाई ३–४ दिनदेखि लगातार ज्वरो र खोकी आएको जनाइएको छ ।
कोरोना भाईरसको महामारीका बेला मिल्दाजुल्दा लक्षणहरु देखिन थालेपछि उनी सहित उनका परिवारलाई नै ट्रिपरमा राखेर बिरगंज ल्याउने तयारी भइरहेको ठोरी वडा नं. २ का वडाध्यक्ष किशोर तामाङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “हामीले आज बिहान थाहा पायौं र सुरक्षितसंग उनको घरमा पुग्यौं । उनी १९ तारिख दिल्लीबाट नेपाल आएका रहेछन् । ३–४ दिन अघिदेखि निरन्तर ज्वरो आउने र खोकी लाग्ने भएपछि उहाँले नै मलाई बीरगन्ज लैजानुहोस भन्नुभयो । यदि कोरोना नै हो रहेछ भने उनको परिवारलाई पनि संक्रमण हुन सक्ने भन्दै परिवारलाई समेत बीरगन्ज लैजाने तयारी गरिएको छ । “
बाडा गाउँमा पुगेर आएपछि आकस्मिक रुपमा वडा समन्वय समितिको बैठक बसेको र बीरगन्ज लैजाने निर्णय भएको अध्यक्ष तामाङले बताउनुभयो । ट्रिपरमा लैजादा ड्राइभरलाई पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले राम्रो हुने भन्दै ट्रिपर उपलब्ध गराउन गाउँपालिकासंग अनुरोध गरेको पनि अध्यक्ष तामाङको भनाई छ ।